7 Qodob Oo Shacabku Ka Sugayo In Ay Ka Jawaabto Khudbadda Madaxweyne Muuse Biixi - Wardeeq 24 TV
Home Arrimaha Bulshada 7 Qodob Oo Shacabku Ka Sugayo In Ay Ka Jawaabto Khudbadda Madaxweyne...
7 Qodob Oo Shacabku Ka Sugayo In Ay Ka Jawaabto Khudbadda Madaxweyne Muuse Biixi
Madaweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta oo Isniin ah Fadhiga wada jirka ah ee Golaha Baarlamanka Somaliland (Guurtida & Wakiillada) ka jeedinayaa Khudbad-sannadeeddii Dastuuriga ahayd oo markii Afraad uu Golahan ka jeedin doono Muddo Xileedkiisa, tan iyo Bishii November 2017 oo uu ku sugan yahay qasriga looga arrimiyo Somaliland.
Shacabka Somaliland waxa ay khudbadda Madaxweynaha ka filaan in uu ku soo qaado arrimaha waaweyn ee u qabsoomay muddoda u dhaxaysa labada khudbadood ee uu sannad kasta horraantiisa ka jeediyo golahan iyo sidoo kale in uu ka warbixiyo xaaladda dalka ee wakhtigaasi taagan, inkasta oo dadka khudbadaha Madaxweynaha dhaliilaa ku tilmaamaan kuwo gole ka fuul ah oo sheeko dheer u badan oo aan qodobaysnayn.
Khudbaddiisa Afraad ee sannadkan 2021 ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa wakhti aanay wali waxba iska baddalin Nolosha shacabka iyo guud ahaan xaaladda dalku muddadii u talada dalka hayayna Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanay wax muuqda oo la taaban karo xukuumaddiisu ka qaban waddanka marka dib loo milicsado Toddobadii Tiir ee uu ololaha Doorashada Madaxtooyada ku galay sannadkii 2017 oo ah kuwo qabyo ah ama aan intooda badan waxba laga qaban.
Maxay ahaayeen 7-da tiir ee Madaxweynuhu ololaha doorashada ku galay 2017?
Waxa ay ahaayeen 7-tiir oo guud kuwaasi oo ay ka farcamaan qaybo faahfaahsani, waxaanay tiiraarkaasi kala ahaayeen:
Tiirka Arrimaha Bulshada,
Tiirka Amniga iyo Nabadda,
Tiirka Garsoorka iyo Caddaaladda,
Tiirka Siyaasadda Arrimaha Dibedda,
Tiirka Horumarinta maamul-wanaagga iyo la dagaalanka Musuqa
Tiirka Deegaanka iyo Is-beddelka Cimilada.
Tiirka Arrimaha Bulshada oo ay hoos yimaaddaan arrimo kala duwan sida Waxbarashada, Caafimaadka, Waddooyinka, Biyaha iyo wixii la mid ah waxa muuqata in Shacabka Somaliland wali dhibaato weyn ka qabanaan oo iska daa Gobolada iyo degmooyinka dalka’e wali Hargeysa oo caasimadda ahi wax ka yar 20% ay helaan biyo nadiif ah. Waxa ay shacabku is waydiinayaan maxay xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ka qabatay muddo xileedkiisa xaaladahan? Waana arrin la dhawrayo bal waxa uu maanta ka yidhaa.
Tiirkaasi waxa ballanqaadyada KULMIYE ee aan wali soo muuqan wax ka qabshadoodu ka mid ah xaaladda caafimaad ee dalka oo ah mid liidata, tayada waxbarasho ee dugsiyada xukuumadda oo wali ah mid tabcaan ah. Waddooyinkii ay ballan qaaday in ay dhamayso xukuumadda KULMIYE oo aan wali faro ka qodnayn sida Jidka Ceerigaabo, Jidka Oodweyne illaa Hargeysa, Jidka Sallaxlay-Hargeysa, Jidka Balligubadle-Hargeysa, iyo jidadka kale oo dhan.
Xaaladda Dhaqaale ee dalka ayaa inkasta oo uu sarrifka lacagaha qalaad sugan yahay oo aanu muddo dheer halkiisa dhaafin haddana khubarada dhaqaaluhu sida ay sheegaan waxa dalku ku jiraa xaalad dhaqaale oo qallafsan iyada oo nolosha shacabku cidhiidhi tahay, sicir bararka maciishadda quutal daruuriga ahina halkeedii ka sii socoto. Ganacsigana hoos u dhac weyni ku habsaday sannadihii ugu dambeeyey.
Dhinaca kale Garsoorka iyo Caddaaladda oo madaxweynuhu wakhtigii ololaha ballan qaaday in uu wax ka qaban doono ayaa wali shacabku ka qaylinayaa iyada oo warbixinnihii ugu dambeeyey ee hay’adaha waddaniga ah ee xuquuqal Insaanku ka dayrinayaan xadhiga muwaadiniinta ee aan loo marin sifaha sharciga ah, qofka oo muddo dheer xukun la’aan xabsiyada ugu jira mar walbana la rummaan gareeyo, xeerarka gaboobay ee wali ka shaqaynaya maxkamadaha dalka iyo arrimo kale oo ku aaddan dhinaca caddaaladda oo taagan.
Dhinaca maamul wanaagga wali adeegyada xafiisyada dawladaha Hoose iyo Kuwa dawladda dhexeba (Public Services) ayaa ah kuwo liita oo shacabku cabasho badan ka muujiyaan oo aanay waxba iska baddalin. Siyaasadda Arrimaha Dibadda iyo galaangalka Somaliland ee Beesha caalamka ayaa Iyana aad loogu dhaliilaa xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi halka tiirka ugu dambeeya ee deegaanka iyo is baddalka cimilada adduunka aanay xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi dadaal dheeraad ah waxba kaga baddalin Nolosha shacabka. Xaalado biyo la’aaneed ayaa qaylo dhaanteeda kulankii ugu dambeeyey ee Golaha Wasiirrada lagaga hadlayay, cunto yaraan iyo xaalufinta deegaanka ayaa ah kuwo halkii taagan oo aan marnaba hoos u dhicin.
Isku soo wada duuboo intaasi iyo in ka badanba shacabku waxa ay ka dhawrayaan waxa uu maanta ka yidhaa Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo khudbaddiisa dastuuriga ah ka jeedin doona fadhiga wada jirka ah ee Golah Baarlamanka.
Previous article“Lixdankii Waxa Ina Kharibay Waxay Ahayd Hoggaan Xumo…” Faysal Cali Waraabe
Next articleRasaas illaa ay ka dhintaan ’: Booliska ka soo qaxay Myanmar ayaa shaaca ka qaaday amarro